4DAYS/3NIGHTS HANOI-HALONG (AT HOTEL) | Explore Global Travel
4DAYS/3NIGHTS HANOI-HALONG (AT HOTEL)
iq option make money Day 1 Yangon- HaNoi ( -/-/- )
VN 956 RGN-HAN 19:10-21:25 or EK388 1235-1505PM
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟန်နွိုင်းမြို့ ရှိ Noi Bai အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် Asia Tour Vietnam ၏ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ စောင့်ကြိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ လူကြီးမင်းတို့ကို လေဆိပ်မှ ဟော်တယ်သို့ပို့ဆောင် ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ဟန်နွိုင်းဟော်တယ်တွင် တစ်ညတာအိပ်စက်နားခိုမည်ဖြစ်ပါသည်ခင်များ ။
iq option com DAY 2: ဟန်နွိုင်း -ဟာလောင်ဘေး ဟော်တယ်ညအိပ်ခရီးစဉ် (B, L, D)
ဘူဖေးမနက်စာကို ဟော်တယ်တွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက် ယူနက်စကိုအသိအမှတ်ပြု ဟာလောင်ပင်လယ်အော်သို့ လေးနာရီခန့် (160km driving one way – 4hrs drive) သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ဗီယက်နမ်ကြွေထည် ပစ္စည်းများ ဒေသထွက်နာမည်ကြီး ကော်ဖီ နှင့် အခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။အချိန်ရလျှင် ဟာလောင် ပင်လယ်အော် အနီးရှိ မွေးမြူရေးပုလဲ မွေးမြူပုံ အဆင့်ဆင့်နှင့် ပုလဲလက်ဝတ်ရတနာပစည်း များကိုဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်များ။ ဟာလောင်ဘေးသို့ နေ့လည် (၁၂း၀၀)ခန့််တွင် ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး ဟာလောင်သင်္ဘော ခရီးစဉ် စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ။ နေ့လည်စာကို သင်္ဘောပေါ်တွင် စားသုံးရင် ဟာလောင်ဘေတစ်လျှောက် သင်္ဘောဖြင့် လေးနာရီကြာ လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုမည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ ခမ်းနားလှပတဲ့ ဟာလောင်ဘေးအလှကို ခံစားရင်း အမှတ်တရဓါတ်ပုံ များရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ ထို့နောက် Thein Cung Grotto လှိုင်ဂူသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လှပတဲ့ Dog Islet, Sails Islet, Dinh Huong Islet and Ga Choi Stone စသော ကျွန်းငယ်များကို လည်တွေ့မြင်နိုင်ပါ တယ်ခင်များ ။ ညစာကို ဟာလောင်မြို့တွင် စားသုံးမှာ ဖြစ်ပြီး ဟာလောင်ညဈေးကို သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ (ဗီယက်နမ် ထုတ်အ၀တ်အထည်များ လက်ဆောင်ပစည်းများ ယွန်းထည်လက်ယာများ ရိုးရာအစားအသောက်များကို စားသုံးရင် ဟာလောင်ဟော်တယ်တွင် ညအိပ်တည်းခိုမည်ဖြစ်ပါသည်ခင်များ ။ (ကာရာအိုကေများ ယမကာဘားများ စသောနေရာများကို မိမိတို့ အစီအစဉ်ဖြင့် သွားရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။)
binary options successful traders Day3: ဟာလောင်ဘေ – ဟန်နွိုင်း ( B/ L / D )
မနက်စာ စားသုံးပြီးနောက် ဟန်နွိုင်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည်ဖြစ် ပါသည် ။ လမ်းခရီး တွင် Dong Trieu Ceramics Village ကို သွားရောက်လည်ပတ် မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုရွာတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ကြွေထည်ပြုလုပ်ပုံ မြေအိုးပြုလုပ်ပုံ ပန်းချီပုံဖော်မှု စသော လက်မှုအနုပညာများကို လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ နေ့လည်စာစားသုံးပြီးနောက် Vincom Mega Mall မှာဈေးဝယ်ယူရင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ထင်ရှာတဲ့ Old Quarter မှာ ဈေးဝယ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်များ ။ ထို့နောက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် ရေပေါ်ရုပ်သေပြဇာတ် ကိုကြည့်ရှုခံစားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ညစာစားသုံးပြီးနောက် ဟန်နွိုင်းဟော်တယ်တွင်ညအိပ်တည်းခိုမည်ဖြစ်ပါသည်။
binary option bot2Day4ဟန်နွိုင်းမြို့တွင်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့် လေဆိပ်သို့ (B / L / – )
(VN 957 HAN – RGN 16:40-18:10 or EK389 2245-0020PM)
မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Ba Dinh Square (ရင်ပြင်) Hochiminh Mausoleum (ဟိုချီမင်ဂူဗိမာန် )One Pillar Pagoda (closed on every Monday, Friday, October and November) ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည့် (Temple of Literature )သာယာလှပတဲ့ Hoan Kiem Lake နှင့် The Hue Bridge and Ngoc Son ဘုရားကျောင်းတော် သို့သွားရောက်လည်ပတ်မည် ဖြစ်ပါသည်ခင်များ ။ ထို့နောက် ဟင်းအမျိုးပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိသည့် ဗီယက်နမ်၏ နာမည်ကြီး Sen Tay Ho ဘူဖေးစားသောက်ဆိုင်တွင် နေ့လည်စာစား သုံးမည်ဖြစ် ပါတယ်ခင်များ။.ထို့နောက် Noi Bai အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် မှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပါသည်ခင်များ ) ………….
• Meals: 1Breakfast + 1 Buffet Lunch
• The distance: Hanoi Capital – Noi Bai Airport : 35km – 45 minutes for transfer.
• The ends of program!
Previous4DAYS/3 NIGHTS HANOI – HALONG ON CRUISE- NINH BINH TRUONG AN
Next4DAYS/3NIGHTS HANOI- NINH BINH – HALONG (AT HOTEL)
Handel mit binären Optionen Tel : (95-1)295510, 299389, 291921, 204152, 9010378, 9010379, 9010380, 9010381, 9010382